Dhata nyowani kubva kuApple Watch Series 3 inoenderera ichionekwa | Ndinobva mac
New Apple Watch Series 3 data inoramba ichibuda
Chimwe chezvinhu izvo zviri kutaurwa nezvazvo zvakanyanya maererano neinotevera vhezheni yeApple Watch, iyo Series 3, kwaizove kusvika kweiyo nyowani screen screen iyo inogona kuita kuti mushandisi awedzere kunyatso kuve nani kana zvichibvira. Tinenge tichitaura nezvechiratidziri chitsva icho Ini ndaizotengesa ikozvino OLED tekinoroji kune iyo nyowani micro-LED tekinoroji.
Kana Apple ikatevera iyo imwecheteyo kuvhura uzivi semamwe makore, isu tingave neiyi nyowani Apple Watch panguva imwecheteyo pamwe ingangoita yakasakara pfungwa yeiyo nyowani iPhone yegumi yegumi.
Nhasi zvakadzidzwa kuti zvechokwadi Apple ingadai iri kutogadzirira kutanga kwekugadzirwa kwescreen nyowani yechizvarwa chinotevera cheApple Watch icho chingaite kuti irambe ichikohwa kumwe kubudirira uye iyo tekinoroji. micro-LED, sezvo isingade backlight zvaizoita kuti chishandiso chive chakakora pamwe nekuwedzera kuzvitonga pamwe nekunakidzwa nesarudzo yepamusoro uye yakajeka mivara.
Nekudaro, ichi hachizove icho chete chitsva chaizouya kubva paruoko rweiyi nyowani vhezheni uye zviri izvo kuti muongorori Ming-Chi Kuo akafanotaura kuti inogona kuve neLTE chip iyo yaizowedzera mashandiro edhata nezvose izvi zvinoreva. Kunze kwemazano aya, chinhu chega chakasiirwa isu vagari vemo kugara takamirira juicier nhau kana makuhwa anoita kuti mafungiro edu abhururuke. Uri kumirira iyo Apple Watch Series 3?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » New Apple Watch Series 3 data inoramba ichibuda
ForkLift yeMac, yemahara kwenguva shoma
Yekupedzisira Kucheka Pro X rave riri iro basa raishandiswa kugadzirisa mupfupi Oscar mumiriri